Oromo Free Speech: Ayyaanni Irreecha Malkaa Ateetee Burraayyuu Keessatti Sirna Howwaan Kabajame.
Ayyaanni Irreecha Malkaa Ateetee Burraayyuu Keessatti Sirna Howwaan Kabajame.
Onkololeessaa 6/2013 Ayyaannii Irreechaa Malkaa Ateetee Burraayyuutti Sirna howaa fi ajaa’ibsiisaa ta’een kabajamuu qeerroon gabaase. Qeerroo sagalee weelluu warraaqsaan sadarkaa olaanaatti dhageesifama jira. Torbee Ayyaanaa Irreechaa Hora Arsadii
Bishoftutti kan kabajamuu Ayyaanni Irreechaa Malkaa Ateetee BurraayyuugGuyyaa har’aa kana sirna baay’ee midhagaa fi tokkummaa uummata Oromoo tikseen kabajamaa jiraachuu maddeen keenyaa bakka bu’onnii qeerroo ayyaanicha irraatti argamuun sochii haala ayyaaniichaa hordofaa jiran gabaasan.
Dargaggonni Oromoo fi sabboontoti Ummatni Oromoo Ayyaanichaa irraatti argamaan walleewwaan warraaqsaan sabboonummaa Oromoo, Qabsoo bilisummaa Oromoo fi ABO, Oromoo fi Oromiyaa faarsuun diddaa sirna Wayyaaneef qaban muldhisuun diina rifaasisanii jiru.
Guutummaa ayyaanota irreecha 2013 qeerroon itti fufuun ni gabaasa.
Posted by Oromo firee speech at 6:58 AM